Fananganana orinasa sy fanohanana orinasa ao Latvia
Formation orinasa Latvia
Fananganana orinasa Latvia
Ny fisoratana anarana orinasa
Ny fisoratana anarana orinasa any Latvia
Ny fananganana orinasa any Latvia dia dingana tsotra sy mahitsy. Raha ny marina, dia eo amin'ny laharana faha-19 ao amin'ny World Bank isan-taona ny "Doing Business" isan-taona. Ny karazana karazan'andraikitra ara-dalàna malaza indrindra ao Latvia dia orinasa voafetra ( SIA ) sy orinasa Joint Stock ( AS ). Ny orinasanao dia mety ho voarakitra ho fiaraha-monina manokana (fiaraha-miasa voafetra na ankapobeny) na mpivarotra tokana. Orinasa iray any Latvia dia mety ho voasoratra anarana eo an-toerana sy ivelany ireo voajanahary sy ara-dalàna, ary koa ny fiarahamonina manokana.
Voafetra * € 200
Ny fitambaran'ny € 1950
Torolàlana momba ny sonia nomerika
Ny saram-panjakana tafiditra
Fisoratana anarana VAT 
Fisoratana anarana EDS 
Fampitandremana! Zo ananantsika manokana ny fanovana ny vidiny rehetra aseho isaky ny takian'ny tolotra omena. Amin'ny alàlan'ny baiko anay dia manaiky ny "manomboka amin'ny" fitsipika fototra ianao.
* Fisoratana anarana orinasa Latvian "an-tserasera amin'ny e-sonia."
 Ny fandefasana e-tahiry dia midika hoe fanampiana amin'ny sonia dokambarotra nomerika sy fandefasana an-tserasera.
   Fanampiana sy fanohanana fotsiny.
 Fifanarahana fifanarahana amin'ny notarisary.
 Misolotena / mametraka antontan-taratasy ho anao ao amin'ny Rejistra amin'ny Orinasa Repoblika Latvia.
 Ny adiresy ara-dalàna dia naharitra hatramin'ny iray taona.
 EDS dia rafitra fanambarànana hetra elektronika.
Ny tombony azo amin'ny sehatry ny fandraharahana any Latvia
Iray amin'ireo fifandraisana amin'ny internet haingana indrindra eran'izao tontolo izao;
Fitaterana fitaterana sy lalamby mora;
Fampivoarana ara-teknika sy IT ;
Mpiasa mahay sy mahay fiteny maro samihafa;
Mpikambana ao amin'ny Vondrona Eoropeana ny fanao sy ny Eurozone;
Tsy misy famerana amin'ny mpandraharaha vahiny;
0% ny tahan'ny CIT amin'ny tombony tombony indray;
Toerana tsara amin'ny fanaovana asa-draharaha miaraka amin'ny Atsinanana sy Andrefana;
Politika fahazoan-dàlana mivelona amin'ny laoniny;
Ny fomba fananganana orinasa mahitsy;
Tsy misy sandam-bola avy any ivelany na famerana;
Tsy misy fanatanterahana ilaina amin'ny fananganana orinasa raha ampiasaina ny PoA ;
Fotodrafitrasa avo lenta;
Tontolo iainana ara-bola sy politika.
Ny fizotran'ny orinasan'ny orinasa dia miovaova arak'izay karazana orin'asa tianao hapetrakao. Torak'izany koa, ny adin'ny mpampiasa dia, renivohitra voalohany indrindra ary koa ny fotoana, ny vidiny ary ny antontan-taratasy takiana dia miankina amin'ny karazana orinasa voafidy araka ny lalàna. Matetika ny fizotran'ny orinasa dia azo zaraina ho dingana fito:
Fifanakalozan-kevitra momba ny fampahalalana momba ny orinasa  ;
Famoronana antontan-taratasy ho an'ny fananganana orinasa  ;
Fanokafana ny kaonty banky tsy maharitra (raha ilaina);
Ny famindrana renivohitra voalohany amin'ny banky ho an'ny banky tsy maharitra;
Fandoavana ny saram-panjakana  ;
Ny fananganana orinasa dia mirakitra ny fangatahana ny lisitr'ireo orinasa;
Fanangonana ny fanapahan-kevitra momba ny fananganana orinasa.
 Fanapahan-kevitra momba ny anaran'ny orinasa, adiresy ara-dalàna amin'ny orinasa, vola famatsiana ara-bola sy fizarazarana ara-bola (raha mpiombona roa na maromaro), ary fanontaniana hafa.
 Ny antontan-taratasin'ny fananganana orinasa dia mety tsy hitovy miankina amin'ny karazana orinasa nofidina. Ny antontan-taratasy sasany dia tsy maintsy atao sonia eo anatrehan'ny notovina fianianana iray.
 fandoavana ny saram-pisoratana anarana, fandoavana ny famoahana boky sy ny fandoavam-bola mety hafa.
Raha toa ny orinasa te ho lasa mpandoa hetra hafa azo atao dia azo atao ny misoratra anarana ao anaty lisitra VAT -Payer amin'ny fotoana iray rehefa mandefa ny antontan-taratasy fisoratana anarana amin'ny Daftar of Enterprises.
Fangatahana fisoratana anarana (Pormasy KR4) - tokony hohamarinina;
Memorandum fikambanana na fanapahan-kevitra fampidirana asa raha mpanorina iray;
Fanambarana momba ny banky manamarina ny fandoavana ny vola voalohany;
Ny tombam-bidiny (raha ilaina);
Ny lisitry ny mpandray anjara - ho voamariky;
Ankatoavin'ireo mpikambana rehetra ao amin'ny birao handray andraikitra - tokony hazavaina;
Fampandrenesana adiresy ara-dalàna;
Eken'ilay tompona fananana raha toa ka tsy fananana amina mpanorina ny orinasa ny fananana;
Antontan-taratasy manamarina ny adidim-panjakana sy ny fandoavana ny saram-bokatra.
SIA (mihena ny tombony)
Varotra entin'ny tsirairay
Manontany bebe kokoa
1 (olona voajanahary)
Makà orinasa efa vita
Ny fahazoana orinasa vonona dia safidy mahomby amin'ny fananganana orinasa vaovao. Matetika ny mpandraharaha dia misafidy ny hanana orinasa efa vonona fa raha mila orinasa miasa izy ireo ao anatin'ny ora vitsivitsy. Ny antony iray hafa dia mila ilaina ny hisoratana ny orinasa taloha. Ny fepetra toy izany dia matetika ampidirina ao amin'ny governemanta. Ary koa, mety hihevitra ny orinasa antitra kokoa ho mendri-pitokisana kokoa ny mpiara-miasa sy ny rafi-bolanao.
Raha toa ianao ka nanapa-kevitra ny amin'ny fahazoana orinasa efa vonona fa tsy manorina orinasa vaovao dia misy zavatra maromaro tokony hotadidina:
Azonao atao ny manomboka manomboka ny asan'ny orinasanao avy hatrany aorian'ny fahavitan'ny fividianana. Azafady, raiso fa ny fiovana rehetra, toy ny anaran'ny orinasa dia handany fotoana sy vidiny fanampiny. Ny mpanome tolotra sasany dia manolotra mividy orinasa efa vonona amin'ny sehatra iray. Ilaina ny mitady trano vonona, izay voasoratra anarana hampiasaina amin'ny sehatra mety ho anao.
Ny orinasa efa vonona rehetra dia manana tantara. Mila manao ny zotom-po tokony hataonao ianao mba hahazoana antoka fa madio ny 100% -n'ilay orinasa vonona hividy. Midika izany fa ny orinasa iray dia nanana fiasa mavitrika ary tsy nisy fatiantoka. Matetika, ny mpamatsy serivisy dia manolotra taratasy fanamarinana manamarina ny hetsika fampiasa amin'ny aotin'ny orinasa vonona ny hividy.
Ny vidin'ny orinasa sy ny serivisy efa vita dia misy isan-karazany eo amin'ireo mpamatsy serivisy samihafa. Matetika indrindra ny toetran'ny olona (tsy miankina na ara-dalàna) ary ny toeran'ilay olona (monina na tsy monina) dia hiankina amin'ny vidin'ny fahazoana orinasa efa vonona. Ny vidin'ny salan'isa amin'ny orinasa efa vonona any Latvia dia miovaova eo anelanelan'ny 1 000 EUR sy 1 600 EUR ary ahitana ny tenany:
Fifanakalozan-kevitra momba ny orinasa efa vonona any Latvia;
Fanomanana fifanarahana varotra mahazatra;
Notaryo sy ny saram-panjakana;
Ny fanamafisana fa ny orinasa dia manana tantara madio.
Hetra sy famandrihana trano
Na manao ahoana na manao fangatahana orinasa efa vonona na nandia ny fizotran'ny orinasan-tsarimihetsika, ny lalàm-panjakàna rehetra dia mila manaraka ny fitsipika sasany rehefa momba ny hetra sy ny famakiana boky. Eo ambanin'ny lalàna momba ny hetra sy ny adidy, ny hetra sy ny adidy na ny manampahefana no mandray andraikitra. Betsaka ihany koa ny fepetra amin'ny lafiny politika momba ny fanampiana ho an'ny orinasa natolotry ny governemanta. Ireo orinasa manana toeran'ny sehatra ara-toekarena manokana ( SEZ ), dia mankafy ny tahan-ketra ambany amin'ireo tombony hafa. Ohatra, ny hetra haba amin'ny orinasa dia nidina ho an'ny 3% tombony azo avy amin'ny orinasa manana sata SEZ. Ankoatr'izay, lalàna iray misaraka no nampidirina ho an'ny orinasa manomboka amin'ny 1 Janoary 2017. Ny lalàna vaovao no mamaritra ny manaraka ny programa fanampiana an'ny fanjakana:
Fiampangana hetra ara-tsosialy amin'ny alàlan'ny faneken'ny mpiasa;
Ny fandaharan'asa fanohanana miaraka amin'ny tanjona hahasarika mpiasa mahay;
Hanan-trosa fidiram-bolan'ny orinasa sy famerenan'ny CIT.
Ireo sampandraharaha ara-dalàna, izay fiovana ao anatin'ny fe-potoana 12 volana dia mihoatra ny 50 000 EUR, dia tsy maintsy misoratra anarana ho mpandoa hetra mitambatra. Na izany aza, azo atao ny misoratra anarana amin'ny alàlan'ny mpandoa VAT mialoha ny hahatongavan'ity làlana ity. 21% ny tahan'ny VAT ao Latvia dia 21% ary azo aloa isaky ny isan-telo na isam-bolana, arakaraka ny fitsipi-panao manokana ataon'ny mpandoa hetra.
Hatramin'ny taona 2018, 20% ny hetra haba amin'ny orinasa dia ampiharina amin'ny tombom-barotra izay zaraina amin'ny alàlan'ny fizarana na ampiasaina amin'ny tanjona tsy mifandraika mivantana amin'ny fampandrosoana ny asa. Tsy misy hetra hafa ampiharina amin'ny vola azo avy amin'ny orinasa. Mandoa CIT ny vola azon'izy ireo eran-tany. Ireo olona tsy manana mponina manana orinasa maharitra ( PE ) dia omena sanda mifehy ny CIT amin'ny fidiram-bolan'izy ireo. Raha tsy misy ny PE, ny orinasa vahiny dia mety hiharan'ny hetra mitazona hetra 0 ka hatramin'ny 15% amin'ny fandoavam-bola isan-karazany, toy ny fandoavan-ketra ho an'ny hetra sy ny saram-pitantanana.
Ny orinasa dia mety ho voarakitra ho orinasa micro ihany koa. Raha mifanohitra amin'ireo endrika orinasa ara-dalàna hafa, ny micro-enterprise dia régime ho an'ny hetra fa tsy fanao manokana. Ny orinasan'ny micro dia mandoa hetra 15% amin'ny fihodinan'ny orinasa. Ny orinasam-pifandraisana micro dia miatrika fameperana marobe, toy ny fitambaran'ny fatran'ny isan-taona tsy afaka mihoatra ny 40 000 EUR ary ny karama dia tsy mihoatra ny 720 EUR isam-bolana.
Ny mponina Latviana dia ampandoa hetra momba ny vola miditra amin'ny vola miditra eran-tany. Ny olona tsy mponina dia ampandoa hetra amin'ny fidiram-bolan'ny olona any an-toerana. Tamin'ny taona 2018 dia rafitra fampidiram-bolam-bola mivoatra ho an'ny tena izy no nandroso. Midika izany fa ny hetra miditra amin'ny olona dia voakarama amin'ny vidin'ny hetra samihafa mifototra amin'ny haben'ny hetra azo avy amin'ny hetra. Ireto ny taham-bolan'ny hetra manokana amin'izao fotoana izao:
Ny tahan'ny fandoavan-ketra manokana an'ny 20% dia ampiharina amin'ny habetsaky ny vola azo hetra izay tsy mihoatra ny 1 667 EUR isam-bolana na 20 004 EUR isan-taona;
Ny tahan'ny hetra mivoaka amin'ny vola manokana 23% dia ampiharina amin'ny habetsaky ny haba azo avy amin'ny hetra, izay eo anelanelan'ny 1 667 EUR sy 5 233 EUR isam-bolana na eo anelanelan'ny 20 004 EUR sy 62 800 EUR isan-taona;
314,4% ny hetra miditra amin'ny vola miditra amin'ny haba manokana izay mihoatra ny 5 233 EUR isam-bolana na 62 800 EUR isan-taona.
Ny hetra hafa alain'ny orinasa any Latvia dia misy ny hetra amin'ny fiarovana ara-tsosialy sy ny andraikitry ny fanjakana amin'ny risika ara-barotra. Ny orinasa Latvian dia voatery mametraka ny tatitra momba ny hetra alohan'ny faha-15 volana manaraka. Ny fanambarana momba ny fitantanam-bola amin'ny taona faran'ny taona dia tokony hapetraka tsy mihoatra ny efa-bolana taorian'ny faran'ny taona.
Fahazoan-dàlana amin'ny trano fonenana ao Latvia
Ny tombony hafa amin'ny fisoratana anarana ny orinasanao any Latvia dia ny fananana fahazoan-trano fonenana ao Latvia. Amin'ny alalàn'ny fahazoan-dàlana any Latvia, dia afaka mandeha malalaka ianao ao anatin'ny faritr'i Schengen mandritra ny 90 andro ao anatin'ny enim-bolana. Ireo olona nahazo alalana fonenana Latvian, ary koa ny fianakaviany, dia manana ny zo hiasa, hianatra ary hampiasa ny fitsaboana ara-pitsaboana any Latvia. Ny tombony hafa dia misy ny fanamorana ny fahazoana visa any Etazonia sy ny firenena hafa.
Ny rafitry ny famoahana trano fonenana dia mahita safidy isan-karazany amin'ny fahazoan-dàlana hitoerana amin'ny alàlan'ny orinasa any Latvia:
Fampiasam-bola ao an-drenivohitry ny orinasa Latvian - afaka mangataka fahazoan-dàlana hipetraha ny teratany vahiny raha nandray anjara tamin'ny renivohitry ny orinasa Latvian izy. Ny renivola voatsara dia tsy tokony ho latsaky ny 50 000 EUR (raha tsy mihoatra ny 10 000 000 EUR ny orinasa isan-taona ary tsy manana mpiasa mihoatra ny 50), na 100 000 EUR (raha mihoatra ny 10 000 000 EUR ny orinasa isan-taona. manana mpiasa maherin'ny 50 miaraka amin'ireo orinasany).
Lasa mpikamban'ny birao, mpitantana, mpikambana ao amin'ny filankevitra, solontenan'ny fiaraha-miasa, mpisolo toerana, mpisolo toerana na solontenan'ny mpivarotra vahiny amin'ny hetsika isan-karazany mifandraika amin'ny sampana orinasa vahiny na orinasa Latvian.
Lasa mpiasa any amin'ny orinasa Latvian izay misy karama farany ambany 860 EUR isam-bolana. Ny fahazoan-trano fonenana ity dia mivoaka mandritra ny 5 taona fa tokony hitarina isan-taona.
Raha tsy izany dia misy fangatahana mangataka visa visa C. C type visa dia visa maharitra fotoana ao Schengen faritra. Izy io dia mety ho fahazoan-dàlana fampitomboana, na avo roa na roa-miditra.
Ny visa C-type manan-kery ao amin'ny fanjakana mpikambana rehetra ao Schengen - visa iray mampiray, izay manome alàlana ny tompony hijanona ao amin'ny faritanin'ny mpikambana Schengen;
Ny visa C-type dia tsy manan-kery afa-tsy amin'ny fiteny Latvia, na amin'ny fanilihana ny fanjakana mpikambana ao amin'ny Schengen.
Olom-pirenena amin'ny Vondrona Eropeana ihany koa dia mahazo fahazoan-dàlana any fonenany any Latvia raha toa ka nipetraka tao Latvia ilay olona nandritra ny dimy na mihoatra. Amin'ny tranga sasany dia tsy voahaja ny fitsipika dimy taona.
Manaiky tahiry tahiry manokana aho.
Fandraisana mifandray haingana